Farany! RTVE dia mandefa ny fampiharana ho an'ny Apple TV | Avy amin'ny mac aho
Fahagagana lehibe iray noraisiko minitra vitsy lasa izay, rehefa hitako fa farany nisy olona iray tany Espaniola naka ny fandraisana andraikitra tamin'ny alàlan'ny fandefasana rindranasa iray hahafahantsika mankafy ny atiny rehetra ao amin'ny Apple TV, izany dia momba ny RTVE izay ny fampiharana azy amin'ny iPhone sy iPad dia ireo izay miasa tsara indrindra, hatreto, ary manantena izany ihany koa isika amin'ity dia vaovao ity.
RTVE efa amin'ny Apple TV anao, fifaliana
Betsaka amintsika no mety tsy dia tia ny foronim-pirenena fa RTVE manana filokana, satria izy koa dia iray amin'ireo iraka nampanaovina azy, ho azy izay manana titre lehibe toa ny Ny minisiteran'ny fotoana, Isabel, Voromahery Mena, Teneno aho sy ny maro hafa.
Ankoatr'izay, ny orinasam-bahoaka dia toa nihaino ny fitarainako hatrany Apple Talking toy ny Podcast ratsy indrindra ary farany, hatramin'ny nanombohany ny volana novambra lasa teo, nandefa fampiharana manokana ho an'ny Apple TV Izay, avy amin'ilay zavatra kely hitako, dia miasa toy ny hatsarana ary misy ny andiany fahitalavitra Espaniôla rehetra hatramin'ny fandefasana ilay fizarana farany ary, lojika tsy misy doka.
Amin'ny ankapobeny, ny fampiharana RTVE ho an'ny Apple TV mametraka eo am-pelatànantsika "horonantsary maherin'ny 3.700 ora misy andiany 154", andao, izao isika dia afaka mandeha any amin'ny farmasia raha mitete maso😅
Ao amin'ilay fampiharana - antsoina hoe Alacarta andian-dahatsoratra RTVE - ny mpampiasa dia afaka manana andiany malaza toa azy ireo toy ny Acacias, Six Sisters, Cuéntame, ny Ministry of Time, Red Eagle ary maro hafa maimaimpoana tanteraka.
Ao amin'ny efijery lehibe no ahitantsika ny fizarana voalohany amin'ny atiny nasongadina narahin'ny "Fampitana toko farany".
Azontsika atao koa ny manisy marika ireo andian-tantara ankafizintsika ary hiseho ireo ao amin'ilay fizarana manaraka ilay teo aloha.
Ny fiasan'ny fampiharana RTVE ho an'ny Apple TV tena tsotra. Avy amin'ny menio lehibe no ahafahantsika mikaroka isan-karazany amin'ireo andian-tantara tiantsika indrindra na mandeha mivantana amin'ilay andian-tantara izay tsy azontsika atao ny mijanona tsy mahita amin'ny takelaka "Fikarohana", ahafahantsika miditra an-tanana ilay lohateny avy amin'ny Siri Remote anay, mibaiko azy na avy ny fampiharana Remote avy amin'ny iPhone, iPad na iPod Touch na avy amin'ny klavier izay nampiarahinay tamin'ny alàlan'ny Bluetooth.
Ny andian-dahatsoratra RTVE rehetra dia misy ao amin'ny Apple TV handany azy ireo isaky ny misy na aiza na aiza no tadiavinao, amin'ny dingana voalohany ataon'ny orinasa raha oharina amin'ireo mpampita vaovao eropeana. Raha ny marina, ny fampiharana RTVE dia anisan'ny misongadina amin'ny serivisin'i Apple.
amim-pahombiazana, RTVE no vondrona haino aman-jery voalohany any Espana miloka amin'ny Apple TV ary manome ny atiny rehetra ho an'ny mpampiasa izy, ary ho an'izany irery dia efa mendrika ny latsa-baton'ny fahatokianay izy, na dia efa manohana azy mihoatra noho ny zava-drehetra aza ny firaketana ny fizotrany miharihary ao amin'ny iOS.
Mediaset, A3Media, Yomvi, matotra, tsy haiko izay …… miandry ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Farany! RTVE dia mandefa ny fampiharana ho an'ny Apple TV
Ary maninona no andiany ihany? Ahoana ny amin'ny programa sy fantsona mivantana toy ny fampiharana ipad?
Valiny tamin'i Elmio
Ataovy miavaka ny batterin'ny Mac amin'ny faran'ny Star Wars miaraka amin'ny 'BatterySable'